I-Star Vega: izici, izinganekwane, indawo kanye nama-exoplanets | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Siyazi ukuthi indawo yonke yakhiwe yizigidigidi zezinkanyezi eziqoqwe yimilaza. Enye yezinkanyezi ezaziwa kakhulu yi- inkanyezi Vega. Yinkanyezi esenkanyezini yaseLyre futhi iyinkanyezi yesihlanu ekhanya kakhulu esibhakabhakeni sonke sasebusuku. Uma sisengxenyeni esenyakatho ye-hemisphere yasezulwini, okungokwesibili okukhanyayo ngemuva kuka-Arthur. Itholakala kuphela ebangeni eliyiminyaka engu-25 yokukhanya ukusuka kwiplanethi yethu futhi ingenye yezinkanyezi ezikhanya kakhulu eduze ne- uhlelo lwelanga.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana nenkanyezi yeVega nezimpawu zayo.
2 Izinganekwane zezinkanyezi zeVega
3 Inkanyezi iVega nabangaphandle
IVega yinkanyezi ethathwa njengeqanda ngosayizi nokubukwa. Ngemuva kokukhipha amanani ezihlungi eziluhlaza okwesibhakabhaka nokuhlaza, inkomba yemibala ye-BV ingu-zero. Ukusuka emhlabathini, uziro kubuye kube ubukhulu baso obubonakalayo. Ngenxa yesivinini sayo sokujikeleza okuphezulu, ngaphezu komehluko obalulekile ekushiseni komhlaba, futhi kunenkinga yokuthanjiswa okungajwayelekile, ukubhalisa izinga lokushisa ebusweni e-equator nasezigxotsheni. Esinye sezigxobo zenkanyezi sikhomba eMhlabeni.
Esinye isici senkanyezi iVega yidiski enothuli ezungeze inkanyezi. Eminyakeni eyizigidigidi eyedlule, ilanga lalizungezwe ngale ndlela. Idiski yamanje yeVega ingaba umsuka wezinhlelo zesikhathi esizayo zeplanethi ezifana nezethu. Kungenzeka nokuthi namuhla uneplanethi engaphezu kweyodwa yohlobo lukaJovian noma lweNeptunian. Idiski yothuli ezungeze iVega ifaka imfucumfucu yokushayisana okwedlule phakathi kwama-asteroid. Bangakwazi futhi kube yizinto ezincane ze-protoplanetary ezahlukanisayo futhi zenze izakhiwo ezifana nebhande lethu le-Kuiper.
UVega uyinkanyezi ekhanya kunazo zonke e-constellation Lyra ehlobo elisenyakatho. Ngobusuku behlobo enyakatho Nenkabazwe, kungabonakala kakhulu eduze ne-zenith maphakathi nenyakatho latitude. Ukusuka ebangeni ukuya eningizimu, kungabonakala emkhathizwe osenyakatho ngesikhathi sasebusika eningizimu yezwe. I-latitude ingu-38,78 °. Inkanyezi iVega ingabonakala kuphela ebangeni elingasenyakatho kwe-51 ° S, ngakho-ke iVega ayibonakali e-Antarctica noma engxenyeni eseningizimu yeNingizimu Melika. Kububanzi obungu- + 51 ° N, iVega iyaqhubeka ngaphezulu komkhathi njengenkanyezi eyindilinga.
Izinganekwane zezinkanyezi zeVega
Ezinganekwaneni zasendulo zamaGrikhi, le nkanyezi iyihabhu lomnyuziyamu owasungulwa nguHermes wanikwa u-Apollo ukumnxephezela ngokweba. U-Apollo wawunika u-Orpheus futhi, lapho efa, uZeus waphendula ihabhu laba yinkanyezi. UVega umele isibambo sehabhu.
Ezinganekwaneni zamaShayina, kunendaba yothando ngoQi Xi, lapho uNuu Lang (Altair) namadodana akhe amabili (β no γ Aquila) behlukaniswa nonina, uZhinu (Vega), ohlala ngasemfuleni ngakolunye uhlangothi . , indlela yobisi. Kodwa-ke, njalo ngonyaka ngosuku lweshumi nesikhombisa lwekhalenda lezinyanga zamaShayina, kuzoba nebhuloho, ngakho-ke uNui Lang noZhi Nu bangabuyelana ngokushesha.
Igama elithi Wega (kamuva owaba uVega) livela ekuhumusheni igama lesi-Arabhu elithi waliqi, elisho "ukuwa" noma "ukuwela phansi."
Inkanyezi iVega nabangaphandle
Yize lokhu kungashintsha maduzane. Iqembu labacwaningi lithembele eminyakeni yokubheka ukuze lihlaziye imvelo yenkanyezi. Uma lokhu okutholakele kuqondile, ama-exoplanet uVega angaba nawo ekuzungezeni kwawo azoba ngokweqile. Isondele kakhulu enkanyezini kuze kuthathe izinsuku ezingaphansi kwezimbili nohhafu zomhlaba ukuqedela umbuthano ogcwele. Isibonelo, iMercury, iplanethi esondele kakhulu elangeni, kuthatha izinsuku ezingama-88 ukuqeda umzila owodwa. Ukushisa kwakho kuzoba esinye isici esibi kakhulu.
Izinga lokushisa kwendawo elinganiselwa ku-2976 degrees. Lokhu kuzoba yi-exoplanet yesibili eshisayo eyake yabonwa. Ucwaningo lungasiza futhi ekutholeni ukuthi ngabe inkanyezi iVega ingaba namanye ama-exoplanet aseduze. Ngemuva kwakho konke, njengoba kusho abacwaningi, sibhekene nesistimu enkulu kakhulu kunesimiso sonozungezilanga. Ngakho-ke, azikwazi ukukhipha ukuthi kukhona amanye amaplanethi azungeze inkanyezi. Kulokhu, umbuzo kuphela ukuthi banalo yini ikhono lokuzibona.
Njengamanje, sekutholwe ama-exoplanet angaphezu kwama-4000. Kodwa-ke, kuyo yonke imihlaba engaphandle kwesimiso sonozungezilanga, mincane kuphela ekhanga ngempela. Zimbalwa kuphela ezitholakala ezungeze izinkanyezi ezikhanyayo noma eziseduze noMhlaba njengeVega. Ngakho-ke, uma kukhona iplanethi ezungeze inkanyezi, ingafundelwa ngokuningiliziwe. Ukutholakala kwe-exoplanet ezungeze iVega kuzoba yizindaba ezinhle kakhulu, noma ngabe kungumhlaba ongeke ukwazi ukuhlala kude.
Abaphenyi bathole izimpawu ezingakhombisa ukuthi kukhona ama-exoplanet. Inkanyezi iVega ingahle ibe neJupiter eshisayo. Ngamanye amagama, iplanethi enkulu, efana neJupiter, izungeza eduze kakhulu nenkanyezi yayo. Kodwa-ke, ukusondela enkanyezini kuneJupiter kuselangeni, kungaba yiplanethi eshisa kakhulu. Kungaba futhi iNeptune eshisayo. Indlela iyefana, kepha kusetshenziswa iplanethi enesisindo esifana neNeptune, Jupiter. Okungenani, ngokusho kwabaphenyi, uma ngabe le exoplanet ikhona, izoba nesisindo esifanayo noNeptune.
Emibonweni kukhona okunye okweqile okuthiwa yiplanethi enamadwala. Lokho wukuthi, siyazi ukuthi iplanethi iJupiter inegesi. Kunoma ikuphi, yize iplanethi yenkanyezi yakhe yayiyiqiniso, yayikude kakhulu nendawo okwakungahlalwa kuyo, ngakho-ke asibhekene ne-exoplanet ethokozisayo yokufuna impilo yangaphandle. Ukuba seduze kakhulu nenkanyezi iVega, Le exoplanet ifunda ukuthi ungayifaka kanjani sengathi ibhaluni. Lokho bekungaba ukushisa kwalo kuze kuthi nensimbi ingancibilika emkhathini wayo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngenkanyezi iVega, izici zayo nokuzungezile.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Inkanyezi Vega